WeChat na-ezube igbasa usoro Ecommerce ya na Europe | ECommerce ozi ọma
WeChat na-ezube igbasa usoro Ecommerce ya na Europe
Susana Maria Urbano Mateos | | Ahịa azụmahịa
Ugbu a A na-ahụta WeChat dịka usoro mgbasa ozi mgbasa ozi kachasị ewu ewu na China. Companylọ ọrụ ahụ na-ezube ịgbasa ọrụ e-commerce ya na ụdị dị iche iche na Europe, na United Kingdom bụ mba ebe a na-atụ anya ịrụ ọrụ mbụ.
WeChat na ya Ecommerce n'elu ikpo okwu
WeChat bụ nke ụlọ ọrụ teknụzụ Tencent, nke na-enye ọrụ ịkparịta ụka n'socialntanet, ọnụ ụzọ weebụ, yana ọrụ izi ozi ozugbo, egwuregwu, na e-commerce. Ebumnuche Ecommerce gị ga-abụ na mbụ dị na UK ka ụlọ ọrụ ndị Britain jiri ree ngwaahịa ha na China.
N'ikpeazụ a na-atụ anya na ikpo okwu e-commerce a ga-amalite ịrụ ọrụ na mba ndị ọzọ dịka Germany na France. Dị ka onye nduzi European nke Tencent, Andrea Ghizzoni si kwuo, ụlọ ọrụ ahụ na-agbasawanye ọrụ gị na United Kingdom site n'ọnwa Eprel a ma na-ezube ịmalite ọrụ na mba Europe ndị ọzọ n'afọ ọzọ.
Ebumnuche doro anya, iji rụọ ọrụ na ụdị ndị Europe iji ree ngwaahịa ha site na Ikpo okwu WeChat na China. Nke a dị ezigbo mkpa dịka ụlọ ọrụ nwere ike si otu a zere akụkụ nke ọrụ gọọmentị nke ịtọlite ​​nke ha Ọrụ mkpọsa na China. Tencent kwuru na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 95% nke ụdị okomoko zuru ụwa ọnụ dị na WeChat ugbu a, gụnyere Valentino, Burberry, Prada, Zegna, na Mulberry.
Naanị afọ abụọ gara aga, pasent a bụ 50%, ebe afọ gara aga bụ 75%, nke na-ekpughe uto na-adịgide adịgide ma na-abawanye. O kwesiri ekwusi na Companylọ ọrụ ahụ na-ezube itinye ọrụ ịkwụ ụgwọ mba ụwa maka ndị ahịa mba. Nke a pụtara na ndị njem nlegharị anya nke China ga-enwe ike iji WeChat Pay na ụlọ ahịa ndị Europe.
Site na WeChat ngwa, ndị ọrụ na-enye mgbasa ozi mmekọrịta, ozi ngwa ngwa, yana ịzụ ahịa, egwu egwu, ha nwedịrị ike ịgba akwụkwọ tagzi ma ọ bụ tiketi nkiri.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Ahịa azụmahịa » WeChat na-ezube igbasa usoro Ecommerce ya na Europe
BigCommerce na-ekwupụta ọkwa Ecommerce ọhụrụ na ThemeForest
Amazon Prime Ahịa Target Grocery Ecommerce